Mee atụmatụ, kekọrịta, rụkọta ọrụ na kesaa ọrụ okike | Martech Zone
Mee atụmatụ, kekọrịta, rụkọta ọrụ ma kesaa ọrụ okike
Tọzdee, Disemba 18, 2012 Tọzdee, Disemba 18, 2012 Douglas Karr
Anyị dere banyere Njikwa Akụrụngwa n'oge gara aga. Widen, ụlọ ọrụ Digital Asset Management, ka rụchara ọrụ ugbu a EchicheShare. Njikọ nke nyiwe ndị a na-enye gị ohere ịhazi, kesaa, rụkọta ma kesaa ọrụ okike gị. Nke a bụ nnukwu ụzọ ijikọ… na - enyere nhazi usoro ọrụ gburugburu akụ dijitalụ ọ bụla - ọkachasị bandwidth, nnukwu faịlụ vidiyo na-ekesa.
EchicheShare bụ a Nchịkwa Ọrụ Nchịkwa (COM) ikpo okwu nke na enye ohere ka ndi otu ahia na ndi oru ihe rute, nyochaa, imeko ma kwado oru okike; onyonyo, dọkụmentị, ibe weebụ, akụ ọdịyo, akụ mmekọrịta na akụ vidiyo. Widen ejirila mkpokọta mgbasa ozi na ConceptShare iji nye ndị ahịa ahịa niile ngwa ngwa a.
Idgbasapụ / ConceptShare Mmekọrịta Njikọ
Idmụbawanye onye ọrụ na-ebugo akụ (s) na saịtị DAM
Onye ọrụ na-ahọrọ iziga akụ (s) na ebe ọrụ ha na ConceptShare si na Akụkụ Nkọwa Ihe Akụrụngwa. Ikike izipu akụ na ConceptShare bụ ikike enyere gị.
Onye nchịkwa na-abanye na ConceptShare ma na-amalite nyocha ihe okike (gụnyere ịgbanye, ịza ajụjụ, akara ngosi, nnabata na ụzọ nyocha). Ndị ọrụ nwere ụfọdụ ConceptShare ikike ọchịchị nwere ike ijikwa ndị na-enyocha ya (yabụ, kpọọ ndị mmadụ ka ha kwuo okwu ma depụta akụ (s) na oghere ọrụ.
A na-edozi akụ na mpụga nke ConceptShare dịka nkọwa na akara akara emere n'oge usoro nyocha ihe okike
Edugharịrị akụ bara ụba na ConceptShare. Onye nchịkwa akara akụ mma or mechara
Ezitere akụ dị mma na saịtị DAM onye ọrụ
Tọ oge ma ọ bụ na-ekiri a ngosipụta nke Widen taa.
Ọdachi na Social Media